kulan dhaxmaray RW. Nuur Cadde iyo Madaxweyne C/llaahi Yuusuf oo natiijo la’aan ku dhamaaday. | JILYAALE_ONLINE
kulan dhaxmaray RW. Nuur Cadde iyo Madaxweyne C/llaahi Yuusuf oo natiijo la’aan ku dhamaaday.
Kulanka dhaxmaray madaxda dowladda KMG ah ayaa waxaa uu ka dhacay shalay galab Xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya, waxaana kulanka C/llaahi Yusuf iyo Nuur Cade uu ahaa mid looga hadlayay sidii meesha looga saari lahaa Khilaafka soo kala dhaxgalay.
Sida ay sheegeen Saraakiil diiday in la soo xigto magacooda oo ka tirsaan dowladda KMG ayaa sheegay kulanka C/llaahi Yuusuf iyo Nuur Cadde in uusan kasoo bixin wax natiijo ah iyaga oo sidoo kale xaqiijiyay in uu guul dareystay.
Inkastoo Saraakiishu aanay si rasmi ah u cadeyn qodobada labada mas’uul ay xooga saarayeen ayaa hadana waxaa inta badan muhiimada kulanku uu ahaa mid looga gol lahaa in meesha laga saaro muranka hareeyay labada mas’uul ee sii kordhayay maalmahaan.
Kulankii shalay oo ahaa kii ugu horeyay ee dhexmara C/llaahi Yusuf iyo Nuur Cade tan iyo markii uu soo ifbaxay muranka ka dhex taagan ayaana soo kordhin wax isfaham ah sida ay xaqijiyeen Saraakil ku dhaw dhaw Madaxtooyada Muqdisho.
Macada in kulanka C/llaahi Yusuf iyo Nuur Cade ay ka shaqeeyeen dhexdhaxaadiyaal iyo in si iskood ah ay u doorteen in ay kulmaan oo ay ka wada hadlaan waxa u dhexeeya.
Madaxwene C/llaahi Yuusuf iyo RW. Nuur Cadde ayaa hada waxaa dhexyaala qilaaf aad u xoogan kaasi oo kusii baahaya qeybaha kale ee dawlada KMG isla markaana waxaa jira kala jiidasho dhinaca xubnaha dawlada KMG oo nin walba uu doonayo in xagiisa loo bato.
Waa markii 3-aad oo khilaaf heerkan gaarsiisan uu soo kala dhexgalo madaxda dawlada KMG intii ay jirtay, waxaana khilaafkii 1-aad ee ugu horeeyay uu ahaa kii soo kala dhex galay C/llaahi Yuusuf iyo Guddoomiyihii hore ee Baarlmaanka Sharif Xasan Sheikh Aadan, waxaana uu keenay in xubno badan ay ka goostaan dawlada KMG ah, iyaga oo kadibna mucaaradka ku biiray.
Khilaafkii 2-aad ayaa ahaa kii soo kala dhexgalay C/llaahi Yuussuf iyo Ra’iisul Wasaarihii hore Cali Maxamed Geedi kaasoo ku dhamaday in ay meesha ka baxaan Cali Geedi iyo rag kale oo aad ugu cad cadaa maamulka dawlada KMG, waxana la sugayaa halka uu ku danbayn doono khilaafka xiligaan taagan, ma sidii Shariif Xasan Sheikh Aadan iyo Cali Geedi ayuu RW. Nuur Cade meesha ka bixi doonaa, mise waji kale ayaa bixi doona.
← Dagaal xoogan oo dhex maray ciidanka maamulka Afgooye iyo kuwa dhowaan lagu soo tababaray dalka Ethiopia.
Abdinasir Said Ibrahim iyo Samia Yusuf Omar oo ah labada qof ee Somalia uga qeyb gashay Cayaaraha ka furmay magaalada Beijing ee China. →